Global Technology Group | 5BB Broadband (Global Technology Company) က Covid-19 ရောဂါကုသရေးဌာန (ရန်ကုန်) ၊ ဖောင်ကြီး သို့ Covid-19 ရောဂါတားဆီး ကာကွယ် နှိမ်နှင်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် အသုံးပြုနိုင်ရန် 100% မြန်နှုန်းမြင့် WiFi Internet ကို ထပ်မံ လှူဒါန်းခြင်း
5BB Broadband (Global Technology Company) က Covid-19 ရောဂါကုသရေးဌာန (ရန်ကုန်) ၊ ဖောင်ကြီး သို့ Covid-19 ရောဂါတားဆီး ကာကွယ် နှိမ်နှင်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် အသုံးပြုနိုင်ရန် 100% မြန်နှုန်းမြင့် WiFi Internet ကို ထပ်မံ လှူဒါန်းခြင်း
တာဝန်သိအဖွဲ့အစည်း Global Technology Company ၏ မြန်မာ့အမြန်ဆုံး အင်တာနက်ဆုရ #5BB Broadband မှ Covid-19 ရောဂါကုသရေးဌာန (ရန်ကုန်) ၊ ဖောင်ကြီး သို့ Covid-19 ရောဂါတားဆီးကာကွယ်နှိမ်နှင်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်များတွင် အသုံးပြုနိုင်ရန် ငွေကျပ်သိန်း(၁၀၀) တန်ဖိုးရှိသော 100% မြန်နှုန်းမြင့် WiFi Internet ကို ထပ်မံသွားရောက်လှူဒါန်းခဲ့ပါသည်။ ဤအလှူသည် #GlobalNet / #5BB ကုမ္ပဏီမှ တာဝန်ရှိသူများ၊ ဝန်ထမ်းများ နှင့် မိမိတို့ Service သုံးစွဲသူ Customers အပေါင်း တို့ရဲ့ စုပေါင်းအလှူလေးဖြစ်ပါကြောင်းကိုလည်း သာဓုခေါ်ဆိုနိုင်ရန် အသိပေးကြေငြာအပ်ပါတယ်ရှင့်။ မြန်မာပြည်သူပြည်သားများအားလုံး ကျန်းမာချမ်းသာ၍ ကပ်ရောဂါဘေးမှကင်းဝေးကြပါစေ. .??? ??Covid Can’t Kill Our Spirit…..you #stayhome we #workforyou